avylavitra · Avrily 2008 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Avrily, 2008
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Avrily, 2008
Siria:Vaovao mipoapoaka momba ny niokleary
Amerika Avaratra 27 Avrily 2008
Omaly, Ny CIA dia namoaka vaovao momba ilay tondroina ho foto-drafitrasa (reacteur) niokleary Siriana naorin’ny Koreana tavaratra. Nitalakotrokotroka ny fivoak’izany tamin’ireo fampahalalam-baovao samihafa. Ny tantara dia nanomboka tamin’ilay fanafihana an’habakabaka tsy fantatra antony nataon’i Israely tany avaratr’i Siria tamin’ny Septambra 2007. Taorian’izay dia nandeha be ny resaka momba ny mety...
Taiwan: Nofinofy toy inona no andrasantsika amin'ny Lalao Ôlaimpika?
Shina 26 Avrily 2008
Raha mikarakara ny Lalao âlaimpika 2008 i Sina dia nilaza hoe “tontolo iray, nofinofy iray, inona no andrasantsika amin'io nofonofy io? Nazavain'i Schumann ny niavian'ny afo Ôlaimpika: 古代希臘人在奧運舉辦前,會按宗教儀式,在奧林匹亞宙斯神廟前的祭壇上點燃火種， […]火炬手高舉火炬,一邊奔跑,一邊呼喊：停止一切戰爭,參加運動會。 火炬傳到哪，哪的戰火就熄滅了。[…]人們忘記了仇恨,忘記了戰爭,都奔向奧林匹亞參加奧林匹克運動會。 久而久之，火炬這個本來用來傳遞信號的工具，便成了和平、光明與友誼的象征. Mialoha ny Lalao Ôlaimpika taloha dia nandrehitra afo teo anoloan'ny Tempolin'i Zeus l'Olympien ny mponina Grika fahiny. […] Ilay...
Koety: Omeo ahy fotsiny ny Espresso-ko
Koety 26 Avrily 2008
Momba an’i Koweït eo an-dàlam-panarenana ny takaitran’ny tafiotra mahery tamin’iny herinandro lasa iny, ny mpitoraka blaogy G, ao amin’ny blaogin’i G, dia naneho sary roa momba ny fahavoazana tavela. Iray amin’ireny ity : … sy ny fanamarihana toy izao: Tonga maraina be mba hiasa aho androany, toy ny efa fahazàrako,...
Egypta:Olona tsy hita nanjavonana
Fahalalahàna miteny 22 Avrily 2008
Mety efa henonao ny momba ny fitokonana tamin'ny 6 Aprily nitranga teto Egypta, sy i Esraa Abdelfattah, mpamorona ny hetsika Facebook Group nosamborina ary avy eo nambara fa tsy hita nanjavonana, ary hoe navotsotra afaka minitra maro taty aoriana. Izany no nanosika an'i Michaelitoo hanapa-kevitra ny hanoratra eto momba azy...
Mananontanona ny ady any Sodana
Sodàna 21 Avrily 2008
Raha ny vitan-dratsy mifanongoa ao ambony ao no mitohy dia hirodana angamba ny fifanarahan'ny Sodane ho amin'ny fandriam-pahalemana tanteraka, nefa alohan'ny hahatongavantsika amin'izany, ndeha hotohizantsika ny fanomezana ireo vaovao tsara sy mahafinaritra. Velom-piderana i Drima momba ilay boky vaovaon'ilay silamo Sodane mampahaizana izay nantsoin'i Irshad Manji mba ho vahininy vao...
SIDA – Zava-pady sy mahamenatra ho an’i Arabo
Bahrain 20 Avrily 2008
Ny SIDA, syndrome immunodéficitaire acquis mahafaty, dia tsy firesaka any amin'ny tontolo Arabo. Saika ity teny mampivarahontsana ity anefa no novoizin'ireo blaogy maro tamin'ity herinandro ity – avy any Jordana, Iraka, Palestina, Bahran sy Yemena. Hareega, jordaniana mpitoraka blaogy, izay mpitsabo no anton'asany, dia mitatitra ‘resaka manafintohina nifanaovany tamin'olom-pantany iray...
Egypta:Ataovy ankivy izao tontolo izao
Fanoherana 18 Avrily 2008
Ny olona eran'izao tontolo izao dia mampiasa ny fanerena ara-toe-karena mba hanoherana fanapahan-kevitra politika amin'ny alalan'ny fiantsoana fanaovana ankivy ny vokatra avy amin'ny firenena voafaritra mazava. Miaraka amina firenena maro izay ampidirina foana ao anatin'ny lisitr'ireo tratry ny ankivy, dia mizara izao hevi-baovao izao ny mpitoraka blaogy Egyptiana Tarek. Ataovy...
Korea: Tsy fahampian’ny vary fahiny sy ankehitriny
Korea Atsimo 18 Avrily 2008
Hita ombieny ombieny ity resaka olana ara-bary ity. Nisy hetsika mafimafy ihany natao teto Korea ho fanoherana ny fanokàfana ny tsenan’ny vary amin’ny firenena hafa. Mpikirakira aterineto iray nandray anjara tamin’ny hetsika ho famelàna ny tsena ho an’ny eto an-toerana ihany no miresaka momba ny fahiny sy ny ankehitriny. 15년전...
Maraoka:Aza kitikitihana ny mpitari-pivavahako!
Fahalalahàna miteny 17 Avrily 2008
Robin des Blogs dia naharay fanamarihana efa ho ampolony mahery tamin'ny hafany momba ny minisitra ao amin'ny Governemanta Marokana niantso ny mpitari-pivavahana (muezzin) tao amina toeram-pivavahana silamo iray mifanakaiky amin'ny faritra natao ho fizahan-tany mba tsy hikaika fivavahana. Ity no lohatenin'ny hafatra,” Aza kitikitihana ny mpitari-pivavahako” [Hands off my muezzin]...
Tadjikistan: Fitsinjarana mitanila ny harena
Tajikistan 17 Avrily 2008
Sahala amin’ny filam-boatsiary izany mitady zavatra mitera-bokatra hatao eto Tadjikistan izany raha toa ianao ka manaraka ny fepetra sy fitsipika rehetra noferan’ny fanjakana. Anaovan’ny olona sangy ratsy mihitsy ny filazana fa ny làlana mora hahatonga ho olona manan-karena dia ny fidirana ho ao amin’ny governemanta na olona akaikin’ny governemanta. Mety...